Blackwater USA (သို့ မဟုတ်) အမေရိကန်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအဖွဲ့အကြောင်း – Lat Khat Than
Blackwater USA”ဆိုတဲ့အမေရိကန်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအဖွဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးကြတယ်မို့လား?နာမည်ကြီးဘဲလေ(အီရတ်စစ်ပွဲမှာ..သူတို့ကို US Private Army လို့လည်းခေါ်ပါတယ်)
အီရတ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့.အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေနဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေအတွက်.အထူးလုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့အပြင်.တနေရာနဲ့တနေရာ.လောင်စာဆီ/ရိက္ခာ/လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို.အာမခံနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုပါ.ယူခဲ့ကြရတဲ့.ကြေးစားစစ်သားဟောင်းတွေနဲ့စုဆောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့.ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ(Private Security Company)တခုပေါ့..
အဲဒီ Blackwater အဖွဲ့ကို1997 မှာစ,တင်တည်ထောင်ခဲ့သူက.US Navy SEALs(ရေတပ်အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဝင်)ဟောင်း.Erik Prince ဆိုတဲ့ကောင်ပါ.အထူးကွန်မန်ဒိုဆိုတဲ့အတိုင်း.သူ့ဆီမှာသိမ်းသွင်းခန့်အပ်ထားသူအများစုကလည်း.အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ဝင်တွေချည့်ပါဘဲ..(တခြားနိုင်ငံက.အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေလည်းပါဝင်သပေါ့)
အမေရိကန်တောင်ပိုင်း.North Carolina နဲ့ Virginia ပြည်နယ်၂-ခုအစပ်မှာရှိတဲ့.Blackwater ကုမ္ပဏီပိုင်မြေဧက(၇၀၀၀)ပေါ်မှာ.စနိုက်ပါသေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်ကွင်း၊ အခက်အခဲကျော်ဖြတ်ကွင်း၊ ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကွင်းတို့နဲ့လူလုပ်ရေကန်ကြီးများအပါအဝင်.စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးနယ်မြေခပ်ကြီးကြီးတခုတည်ဆောက်ထားပါတယ်.လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း.စုံလှသမို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့.ပုဂ္ဂလိကပိုင်.စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကွင်းတွေထဲမှာ.အကြီးဆုံးလောက်ရှိတယ်.(ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်း.လုံခြုံရေးနည်းနာအစုံသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးတယ်.အဲဒီနယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့.ရေကန်တွေရဲ့အရောင်မည်းညစ်ညစ်ကိုအစွဲပြုပြီး.အဖွဲ့နာမည်ကို”Blackwater “လို့အမည်ပေးခဲ့တာပါ)
နောက်ပြီးသူတို့ဆီမှာ.သယ်/ပို့လေယာဉ်၊ ဟယ်လီကော့ပတာ၊သံချပ်ကာယာဉ်-စတဲ့စစ်သုံးယာဉ်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်.သူတို့ပိုင်တဲ့ Thrush အမျိုးအစားလေယာဉ် ၂-စီးမှာဆိုရင်.လက်နက်တွေတောင်တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်..(မြန်မာ့တပ်မတော်-လေမှာလည်း.ဟိုးအရင်က.ဒါမျိုး Thrush လေယာဉ် ၆-စီးရှိခဲ့ပြီး.ဘိန်းခင်းနှိမ်နင်းရေးဆေးဖျန်းရာမှာ.သုံးခဲ့ပါတယ်)
တခါ.သူတို့အဖွဲ့က.ကြေးစား(Mercenary)ပီပီပိုက်ဆံရရင်.ဘာမဆိုလုပ်တာမို့.အချို့ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်မစ်ရှင်တွေကို CIA (ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ)ကိုယ်တိုင်ငှားရမ်းအသုံးပြု/တာဝန်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်.ဥပမာ-အယ်လ်ခိုင်ဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်.အိုစမာဘင်လာဒင်(Osmar Bin Laden)ကို.ခြေရာခံ.လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့..နောက်ပြီး.မူးရစ်ဆေးဝါးခေါင်းဆောင်နဲ့အခြားအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကို.ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းတဲ့.တာဝန်မျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်..
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအနေနဲ့.ယီမင်စစ်ပွဲမှာ.ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကနေငှားရမ်းသုံးစွဲခဲ့တဲ့ကြေးစား ၆-ယောက်ကျဆုံးခဲ့သလို(ခေါင်းဆောင်က.သြစတေးလျက)..အီရတ်မှာ.အပြစ်မဲ့အရပ်သား ၁၄-ဦးကိုသတ်ဖြတ်မှုနဲ့.Blackwater အဖွဲ့ဝင်အချို့.ထောင်ကျခဲ့ကြတယ်.သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆-ယောက်လောက်လည်းစစ်မြေပြင်မှာကျဆုံးခဲ့တယ်.
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ Blackwater ကုမ္ပဏီကို.UAE နိုင်ငံထံရောင်းချပစ်လိုက်တယ်.ဒါကြောင့်.အခုအခါမှာ.အာရပ်တွေပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီ.လောလောဆယ်.ယီမင်စစ်ပွဲထဲမှာ.ဟုသီ(Houthi)လူမျိုးစုတွေကိုသွားတိုက်ရင်း.ခြေရှုပ်နေကြတယ်.မြန်မာနယ်စပ်.ဘကုံးဘက်ကိုတော့ရောက်မလာသေးဘူးလိုထင်ပါရဲ့..
(အဲသလိုရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း.Blackwater Worldwide အမည်ကနေ. Xe Services LLC ကိုပြောင်းခဲ့ပြီး.နောက်ထပ် Academi ဆိုတဲ့နာမည်ကိုထပ်မံပြောင်းလဲကာ၂၀၁၄ မှာ Triple Canopy ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်.အခုနောက်ဆုံးတော့.Constellis Holdings Inc အုပ်စုအောက်ကနေလှုပ်ရှားနေပါတယ်.)
ကဲ..အဓိကပြောချင်တာက.အဲဒါတွေမဟုတ်ဘူးဗျ..Blackwater အဖွဲ့ကို UAE နိုင်ငံထံရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း.စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ(First Founder & CEO)Eric Prince ဘယ်ရောက်သွားပြီး.ဘာတွေဆက်လုပ်နေသလဲဆိုတာပါ..
လိုက်ကြည့်လိုက်တော့..သူက.အခုဟောင်ကောင်မှာ.Frontier Services Group (FSG)ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့Security, Logistics and Insurance ကုမ္ပဏီထောင်ထားပြန်တယ်.ဟောင်ကောင်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာတောင်.တင်ထားသေးတယ်..(Eric Prince က.Blackwater ခေါ်Academi ရဲ့ Chairman အဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီး.ဟောင်ကောင်နဲ့အဘူဒါဘီကြား.ကူးသန်းသွားလာနေပါတယ်)
FSG ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ထူးခြားတာက.သူ့ရဲ့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအများစုထဲမှာ..တရုပ်ပြည်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ကထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ CITIC(China International Trust Investment Corporation)ပါဝင်နေခြင်းပါဘဲ.မကြာမီက.CITIC ရှယ်ယာကို ၁၅%ကနေ.၂၈.၄%ထိတိုးမြှင့်ကာ.ပါဝါတခုရအောင်.လုပ်လာခဲ့တယ်..(FSG ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏက.US $ ၁၀၇-သန်းရှိပါတယ်)
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ.နှစ်ဖက်ချုပ်ဆိုထားကြတဲ့စာချုပ်အရ. တရုပ်ပြည်ကအကောင်အထည်ဆောင်ရွက်မယ့် One Belt One Road (OBOR) Initiative ဂီဂါစီမံကိန်းကြီးအကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ.လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်. Frontier Services Group(FSG)ကိုရွေးချယ်ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံပါဘဲ.
ဒါကြောင့်မကြာမီ.တရုပ်ပြည်တောင်ပိုင်း.ယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာ.FSG ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေထူထောင်ကြဘို့သဘောတူပြီးပါပြီ..ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်သွားကြတော့မှာပါ(သူတို့က.Armed Trainings တွေ.မပါဘူးဆိုပေမဲ့.မယုံကြည်ပါ)
နောက်ဆုံးကြားသိရတာက. FSG တာဝန်ယူရမယ့်နယ်မြေထဲမှာ.မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေပါသတဲ့.CITIC ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေ.မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနှင့်ပြီးဖြစ်တာမို့.နောင်မှာ.သူနဲ့အတူတွဲဝင်လာမယ့် FSG အနေနဲ့.ယခင် Blackwater အဖွဲ့လိုလှုပ်ရှားကြဦးမှာလားဆိုတာ.စောင့်ကြည့်ရပေဦးမပေါ့..(မြန်မာပြည်ထဲက.ကျောက်ဖြူ/ကူမင်းရေနံပိုက်လိုင်းနဲ့တရုပ်ပိုင်ကမ်းလွန်/ကုန်းတွင်းရေနံတွင်းတွေအပြင်.လက်ပံတောင်းကြေးနီတောင်စီမံကိန်းမျိုးတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဘို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပုံပါဘဲ)
နေပြည်တော် အကျဉ်းထောင်မှ ထွက်ပြေးသွားသည့် လူသတ်မှုဖြင့် စစ်ဆေးဆဲ တရားခံနှစ်ဦးကို ပြန်လည်ဖမ်းမိ